राजनीति Archives - Nepal Bizz
१८ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि राष्ट्रियसभामा जुत्ता प्रहार भएको छ । यद्यपि उनलाई लागेन । नेकपा नेता भरतमोहन अधिकारीको प्रथम स्मृति सभामा संबोधन गरेर सिटमा फर्किने क्रममा उनीमाथि दर्शकदीर्घाबाट उनलाई ताकेर जुत्ता प्रहार भएको हो । तर जुत्ता मञ्चसम्म आइपुगेन । जुत्ता प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्‍त्रणमा लिएको छ […]
Posted on १८ फाल्गुन २०७६, आईतवार १५:५९ Author admin	Comment(0)
८ फागुन, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बास्कोटाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्हाल्ने गरी तोकेकी छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग कमिसनका विषयमा छलफल भएको अडियो सार्वजनिक […]
Posted on ८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार २१:३८ Author admin	Comment(0)
Posted on २३ माघ २०७६, बिहीबार १०:४७ Author admin	Comment(0)
Posted on ८ माघ २०७६, बुधबार १४:४१ Author admin	Comment(0)
४ माघ, काठमाडौं । एमसीसी ठीक कि गलत ? राजनीतिक तहमा केही सेलाएको बहस अहिले सामाजिक सञ्जालमा भने निकै तातेको छ । रोचक कुरा, यो बहसले युवा पुस्ता पनि तानिएका छन् । राष्ट्रिय एजेन्डामाथि युवाहरुले चासो राखेर बहसमा उत्रिनु राम्रो हो । तर, सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण प्रचारवाजी पनि उत्तिकै भइरहेका छन् । ‘सम्झौताका आपत्तिजनक बुँदा’ […]
देशकै राम्रो मानिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा किन लगाइयो ताला,
१७ पुस, काठमाडौं । आन्तरिक विवादका कारण काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा पठनपाठन बन्द भएको छ । आन्दोलन विगतदेखि नै हुँदै भए पनि पठनपाठन रोकिएको थिएन । तर मंगलबारदेखि पहिलो पटक विश्वविद्यालयमा सबै पठनपाठन बन्द भएको छ । ‘यसअघिका आन्दोलनमा कार्यकक्षहरुमात्र बन्द हुन्थे, तर अहिले त पठनपाठन नै अवरुद्ध भएको छ,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीले भने । […]
Posted on १७ पुष २०७६, बिहीबार १२:५५ Author admin	Comment(0)
सरकारलाई धक्का सर्वोच्चले माग्यो सुगौली सन्धिदेखिकै ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साको विवरण
१७ पुस,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि तथा नेपालको आधिकारिक नक्सासहित १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सुगौली सन्धिदेखिकै ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि अदालतमा सोमवार सुनुवाइ भएको थियो । […]
Posted on १७ पुष २०७६, बिहीबार १२:३८ Author admin	Comment(0)
बिचार तथा अन्तर्वार्ता राजनीति
बाबुराम भट्टराईको व्यंग्य अब पूरै देश ‘यती’कै जिम्मा लगाए भैगो नि
१३ पुस, काठमाडौं । समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विवादित गोकर्ण फरेस्ट रिर्सोट प्रकरणबारे व्यंग्य गरेका छन् । ‘यती’को खोजीमा वैज्ञानिकहरू आजित भएको वैज्ञानिकहरू आजित भएको बेला हाम्रा प्रम र आसेपासेहरूले उसलाई हुर्काएर यस्तो जब्बर जन्तु बनाइसकेछन्’ डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा टि्वट गरेका छन्, ‘नेपाल ट्रस्टका पदाधिकारीहरूले ‘यती’ नहुने हो भने […]
Posted on १५ पुष २०७६, मंगलवार १६:०९ Author admin	Comment(0)
Posted on ८ पुष २०७६, मंगलवार १५:२८ Author admin	Comment(0)
सर्वोच्चको आदेशले जनप्रतिनिधिलाई सकस
काठमाडौं : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। प्रदेशले बनाएका त्यस्ता कानुन संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष संवैधानिक इजलासले निकालेको छ। २९ हजार ५ सय ६५ जनप्रतिनिधिले अवैध तवरले पारिश्रमिक सुविधा लिइरहेका थिए। त्यसमा महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा संलग्न जनप्रतिनिधि छन्। पारिश्रमिकसहित सेवासुविधाको व्यवस्था ६ वटा प्रदेशमा कार्यान्वयनमा […]
Posted on २ कार्तिक २०७६, शनिबार ०८:५३ Author admin	Comment(0)